Samsung မှလာမည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် GPU ဖြစ်သည် Androidsis
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က Exynos သည် Qualcomm Snapdragon နှင့်နီးစပ်မည်ဟုဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဇာတ်လမ်းကိုကောင်းစွာသိသောကြောင့်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ Samsung သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် GPU ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည် သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်၊ နှင့်ဤနံနက်အကြောင်းကိုပို။ သိ။.
ဤ နည်းဗျူဟာအချို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခွင့်ပြုပါတယ် လိုင်စင်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နည်းပညာများရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းနေရသောဤကုမ္ပဏီများအတွက်အနည်းငယ်သောအားထုတ်မှုနှင့်ငွေကြေးဖြင့်သူတို့သည်အခြားသူများရှေ့တွင်ရှိနိုင်သည်။ ဆမ်ဆောင်းကဂိမ်းကစားခြင်းသည်အလွန်ဆိုးရွားလာမည်ကိုသိသောအခါ၎င်းအတွက်အရာအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်။
ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ Samsung သည်၎င်း၏ပထမဆုံး GPU သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်များကိုပေါင်းစပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည် အလင်းကိုမြင်သော Exynos ပရိုဆက်ဆာပေါ်မှာ လာမယ့် high-end မိုဘိုင်း၌တည်၏။ ၎င်း၏ဂရပ်ဖစ်သို့မဟုတ် GPU များကိုအခြားထုတ်လုပ်သူများရရှိနိုင်မည်လားဆိုသည်ကိုမူမသိရှိရသေးသော်လည်းယခုအချိန်တွင်၎င်းသည် Galaxy S. အတွက် Exynos အဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေ ဦး မည်။
ဖြစ်လိမ့်မယ် ပြီးသား Chien-Ping လူးအလုပ်လုပ်နေတယ် ချစ်ပ်၏ဒီဇိုင်းတွင် NVIDIA တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး သည်ပီစီများအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကတ်ပြားအတွက်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ဆမ်ဆောင်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် GPU ကိုတီထွင်နေသော Apple နှင့်အတူတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဆက်သွယ်သည်။
ဒီသတင်းကနေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ထုတ်လုပ်သူတွေကလာမယ့်နှစ်တွေမှာမိုဘိုင်းပစ္စည်းကနေဂိမ်းကစားတာကိုသိကြတယ် ဒါလမ်းကြောင်းသစ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ရှင်းလင်းသော; ဤအရာကို Fortnite ကဲ့သို့သောခေါင်းစဉ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးသားလုပ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် PUBG မိုဘိုင်း.
ယခုအချိန်တွင်မသိရသေးပါကဤနည်းပညာသည်နောင်လာမည့် Galaxy S10 အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မည်ဆိုပါက၎င်းသည်ရက်စွဲများနှင့်နီးကပ်မှုအရမကြာမီဖြစ်မည်ဟုထင်ရသည်။ g ပေးနိုင်သည့် Samsung မိုဘိုင်းအချို့သင်၏ကိုယ်ပိုင် GPU ဖြင့်ဂရပ်ဖစ်စွမ်းရည်တိုးတက်မှုသည်ကြီးမားသည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း PUBG Mobile ကဲ့သို့ဂိမ်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်ဖြစ်သည် သူတို့ကဤကဲ့သို့သောပေါ့ပေါ့ခဲ့ကြသည်လျှင်အဖြစ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Samsung သည်၎င်း၏အဆင့်မြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက်ကိုယ်ပိုင် GPU ကိုစတင်တီထွင်ခဲ့သည်
WhatsApp ကိုစာပို့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကို WhatsApp မှာရောက်နေတဲ့အော်ဒီယိုကိုဘယ်လိုဖတ်မလဲ